Guddoomiyihii Sool ee Xisbiga UCID oo is-casilay | Salaan Media
Guddoomiyihii Sool ee Xisbiga UCID oo is-casilay
Hargeysa, (SM) Guddoomiyaha Xisbiga Mucaaradka ah ee UCID ee gobolka Sool Cabdirashiid Maxamed Bootaan ayaa sheegay inuu iska casilay xilkii uu ka hayay Xisbigaas, waxaanu siyaabo kala duwan uga hadlay sababaha is casilaadiisa.
Cabdirashiid Maxamed Bootaan oo shalay warbaahinta kula hadlay magaalada Laascaanood waxa uu sheegay in is-casilaadiisa ay keentay waxyaabo uu sameeyay xoghayaha xisbiga UCID, taasoo uu tilmaamay inay wax ka qaban waayeen madaxda sare ee xisbigaasi.
Masuulkan ugu sareeyay Gobolka Sool Xisbiga UCID oo arrimahaasi ka hadlaya waxa uu yidhi. “Anigoo ah Cabdirashiid Maxamed Bootaan guddoomiyaha UCID ee gobolka Sool, waxaan shirkan jaraa’id u qabtay in aan dhiibo is-tiqaalad xafiiskii aan u joogay xisbiga UCID oo aan wareejiyo, taasoo ay kaliftay waxyaabo badan oo xoghayaha guud ee xisbiga UCID uu sameeyay, markaa run ahaantii uga bixi maayo xisbiga isagaa lagula tartamayaa xoghayaha, laakiin waxaan iska casilay guddoomiyenimadii aan u hayay xisbig,a maadaama madaxda ka saraysaa waxba ka qaban wayday.”
Cabdirashiid Maxamed Bootaan wxa kale oo uu baaq u diray siyaasiga Cali Khaliif Galaydh waxaana uu u soo jeediyay inuu ka waantoobo magaca Khaatumo ee uu ku shaqaysto. “Waa ceeb Cali Khaliif in maalinba ummadda mutacalin isugu sheego, magacayagana Khaatumaa la yhidhaa uu yidhaahdo, in mustaqbalka ummadan uu ka baabi’iyo maaha.” ayuu yidhi Cabdirashiid Maxamed Bootaan Cabdirashiid Maxamed Bootaan.waxa kale oo uu u soo jeediyay qurbojoogta gobolka Sool inay ka qayb qaataan horumarka gobolka Sool.